Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.6.2 သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းသို့ကျင့်ဝတ် Build: အစားထိုးမွမ်းမံနှင့်လျှော့ချ
ငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုပူဇော်ချင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံဉာဏ်ကို၏ဒုတိယအပိုင်းအစကျင့်ဝတ်ဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကို။ ဝီကီပီးဒီးယားပြပွဲများတွင် barnstars အပေါ် Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt စမ်းသပ်မှုအဖြစ်, ကုန်ကျစရိတ်ကျင့်ဝတ်သုတေသနဒီဇိုင်းတစ်ခု ပို. ပို. အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာမည်ဟုဆိုလိုသည်လျော့နည်းသွားသည်။ တိရိစ္ဆာန်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်လမ်းပြတီထွင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူ: လူ့ဘာသာရပ်များငါမျြးအခနျးကွီး6မှာကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်သည်ဟုသုတေသနလမ်းညွှန်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်များအပြင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းသုတေသီတွေကလည်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည့်အရင်းအမြစ်များထံမှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များအပေါ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, လူ့စမ်းသပ်နည်းစနစ်သူတို့ရဲ့မှတ်တိုင်စာအုပ်အခြေခံမူထဲမှာ Russell and Burch (1959) တိရိစ္ဆာန်သုတေသနကိုလမ်းညွှန်သင့်ကြောင်းသုံးအခြေခံမူအဆိုပြုထား: အစားထိုးမွမ်းမံနှင့်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျွန်မဤသုံးပါး R ကိုဖွင့်လည်းအသုံးပြုကြသည်-in ကိုနိုင်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသောပုံစံမှလူ့စမ်းသပ်ချက်၏ဒီဇိုင်းကိုလမ်းပြအဆိုပြုချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်,
ဤသုံးပါး R ကိုဖွင့်ကွန်ကရစ်စေနှင့်သူတို့အလားအလာပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးလူသားဆန်တဲ့စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြသနိုင်ရန်အတွက်ငါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကြောင်းအွန်လိုင်းမှလယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ငါသုံး R ကိုရဲ့စမ်းသပ်မှု၏ဒီဇိုင်းကိုမှကွန်ကရစ်နှင့်လက်တွေ့အပြောင်းအလဲများအကြံပြုဘယ်လိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
အများဆုံး Ethics အခြေအတင်ဆွေးနွေးဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာအာဒံကို Kramer, ဂျေမီ Guillroy နှင့်ဂျက်ဖရီ Hancock ဟာအားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည် (2014) နှင့်ကိုခေါ်ခံရဖို့ရောက်လာပြီ "စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်။ " ဒီစမ်းသပ်မှု Facebook ပေါ်မှာအရပ်ဌာနကို ယူ. သိပ္ပံနည်းကျတစ်ဦးရောနှောခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့မေးခွန်းများကို။ ထိုအချိန်ကအသုံးပြုသူများက Facebook နှင့်အတူအပြန်အလှန်သောကြီးစိုးနည်းလမ်း News Feed တွေကိုတစ်အသုံးပြုသူရဲ့ Facebook ကိုမိတ်ဆွေများထံမှ Facebook က status ကို updates များကိုတစ်ဦး Algorithm ကိုတာဝန်ယူထားသောထားခဲ့ပါတယ်။ Facebook က၏အချို့ဝေဖန်သူများကအဆိုပါ News Feed တွေကိုအများအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောရေးသားချက်များ-မိတ်ဆွေများကိုသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပါတီ-ကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သလိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူများကိုဝမ်းနည်းခံစားရစေနိုင်ကြောင်းကိုချွတ်ဖေါ်ပြခြင်းရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်: ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်၏အဆွေခင်ပွန်းကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိခြင်းကိုမြင်လျှင်သင်တို့ကိုပျော်ရွှင်ခံစားမိစေပါလိမ့်မယ်။ ဤအယှဉ်ပြိုင်ယူဆချက်နှင့်ဖြေရှင်းရန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုထဲသို့ပြေး ဝင်. သူမ၏မိတ်ဆွေများက '' စိတ်ခံစားမှု-Kramer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးနိုင်ရန်အတွက်။ သူတို့ကတဦးတည်းတစ်ပတ်လေးအုပ်စုများသို့အကြောင်းကို 700,000 အသုံးပြုသူများကိုထားရှိ: အနုတ်လက္ခဏာစကားလုံးများကို (ဥပမာ, "ဝမ်းနည်းဖွယ်") နှင့်အတူပို့စ်များကိုကျပန်းသတင်းများ Feed တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောကနေပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်ဘယ်သူကိုများအတွက် "အဆိုးမြင်အတွေးတွေ-လျှော့ချ" အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားများ (ဥပမာ, "ပျော်ရွှင်") နှင့်အတူပို့စ်များကိုကျပန်းပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်ဘယ်သူကိုများအတွက် "positive-လျှော့ချ" အုပ်စုတစ်စု; နှစ်ယောက်ထိန်းချုပ်အုပ်စုများ။ သည် "အဆိုးမြင်အတွေးတွေ-လျှော့ချ" အုပ်စုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု, ပို့စ်များကိုကျပန်းက "အဆိုးမြင်အတွေးတွေ-လျှော့ချ" အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ပေမယ့်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲတူညီသောနှုန်းပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်။ သည် "positive-လျှော့ချ" အုပ်စုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုတစ်ဦးအပြိုင်ဖက်ရှင်အတွက်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှု၏ဒီဇိုင်းကိုသင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်အစဉ်အမြဲအဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတစျခုမဟုတျကွောငျးဖော်ပြသည်။ အစား, တစ်ခါတစ်ရံ, ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုသုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကိုလိုအပ်သည်အတိအကျနှိုင်းယှဉ်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးဆေးကုသမှုကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်, အ News Feed တွေကိုမရအောင်ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရသောတိုင် Facebook မှက်ဘ်ဆိုက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့်နေဆဲအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။
Kramer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက positive-လျှော့ချအခြေအနေသင်တန်းသားများအဘို့, သူတို့ရဲ့ status ကိုမွမ်းမံမှုများအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားများရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစကားသည်ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဆိုးမြင်အတွေးတွေ-လျှော့ချအခြေအနေသင်တန်းသားများအဘို့, အပြုသဘောစကားလုံးများကိုရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစကားများကြောင့် (ပုံ 4.24) ယုတ်လျော့။ သို့သော်ဤသက်ရောက်မှုအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်: ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစကားခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. 1 1000 ခုနှစ်တွင်စကားလုံးများကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
4,24 ပုံ: စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်များ၏အထောက်အထား (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ။ အဆိုပါအဆိုးမြင်အတွေးတွေ-လျှော့ချအခြေအနေသင်တန်းသားများကိုနည်းပါးလာအနုတ်လက္ခဏာစကားလုံးများကိုနှင့်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားများသုံးခြင်းနှင့် positive-လျှော့ချအခြေအနေသင်တန်းသားများကိုပိုပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောစကားများနှင့်နည်းပါးလာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားများအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘားခန့်မှန်းစံအမှားများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Kramer, Guillory, and Hancock (2014) , ပုံ 1 ။
ဒီစမ်းသပ်မှုအားဖြင့်ကြီးပြင်းလာသည့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီ, ငါအခနျးမှာအစောပိုင်းကနေအိုင်ဒီယာအချို့ကိုသုံးပြီးသုံးသိပ္ပံနည်းကျကိစ္စများကိုဖော်ပြရန်ချင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာကစမ်းသပ်မှု၏အမှန်တကယ်အသေးစိတ်သီအိုရီတောင်းဆိုမှုများကိုချိတ်ဆက်ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, တစ်နည်းအတွက်, ဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာ (1) ကလူတွေ post သောစကားဟူသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းတစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးနှင့် (2) ကမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစကားလုံးအရေအတွက်ကတကယ်တော့ပါဝင်သူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်၏ကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး သုတေသီအသုံးပြုသောသောအထူးသဖြင့်စိတ်ဓါတ်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ technique ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောစိတ်ခံစားမှုအခြနိုင်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း (Beasley and Mason 2015; Panger 2016) ။ တနည်းအားဖြင့်တဖက်သတ် signal ကိုတစ်မကောင်းတဲ့အတိုင်းအတာရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယ, စမ်းသပ်မှု၏ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘာမျှမ (ဆိုလိုသည်မှာ, ကုသမှုသက်ရောက်မှုများပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမရှိဆန်းစစ်လည်းမရှိ) နှင့်ဘာယန္တရားဖြစ်စေခြင်းငှါပြောပြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သုတေသီသင်တန်းသားများကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် Widgets တွေအဖြစ်ကုသခံခဲ့ရသည်။ တတိယ, ဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်ရှိ၏ ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအကြားခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. 1 1000 ခုနှစ်တွင်စကားလုံးများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့စက္ကူများတွင် Kramer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလူသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာကသူတို့သတင်းနေ့ရက်တိုင်း Feed ရယူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရွယ်အစားအနေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရေးကြီးပါတယ်သောကိစ္စတွင်ပါစေ။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့သက်ရောက်မှုလူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အသေးငယ်ပင်လျှင်, သူတို့သည်စုစုပေါင်းအတွက်ကြီးမားသောဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်။ သငျသညျဤဆင်ခြေကိုလက်ခံခဲ့ကြရင်တောင်ဒီအရွယ်အစားအနေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပြန့်ပွားအကြောင်းကိုပိုမိုယေဘုယျသိပ္ပံနည်းကျဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသည်မှန်လျှင်, နေဆဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး (Prentice and Miller 1992) ။
ဤအသိပ္ပံနည်းကျမေးခွန်းများကို, ဒီစက္ကူသိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုထားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးနောက်ရုံရက်ပေါင်းအပြင်, သုတေသီများနှင့်စာနယ်ဇင်းနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးထံမှကြီးမားသောအော်ဟစ်ရှိခဲ့ (ကျနော်အခန်း6တွင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်အငြင်းပွားမှုများကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ် ) ။ ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲမှာကြီးပြင်းအဆိုပါကိစ္စများဂျာနယ်တွင်ကျင့်ဝတ်နှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှားရှားပါးပါး "စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်စကားရပ်" ထုတ်ဝေရန်စေ (Verma 2014) ။
(သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီအထူးသဖြင့်စမ်းသပ်မှု၏ကျင့်ဝတ်ကိုစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, ဘာပဲ) စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်အကြောင်းကိုကြောင်းနောက်ခံပေးထား, ငါသည်ယခုသုံးယောက် R ကိုဖွင့်ကွန်ကရစ်အကြံပြုနိုင်သည်ကိုပြသချင်ပါတယ်အစစ်အမှန်လေ့လာမှုများအဘို့အလက်တွေ့ကျတဲ့တိုးတက်မှုများ။ ပထမဦးဆုံးအ R ကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်ပါသည်: သုတေသီများဖြစ်နိုင်လျှင်, လျော့နည်းထိုးဖောက်နှင့်အန္တရာယ်များနည်းစနစ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ချက်အစားထိုးရန်ရှာအံ့သောငှါသင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစားတစ်ဦး randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှု running ထက်, သုတေသီများသဘာဝစမ်းသပ်မှုအမြတ်ထုတ်နိုင်တယ်။ အခန်း2တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, သဘာဝစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုခုကုသမှု၏ကျပန်းတာဝန်ကျတဲ့ (စစ်တပ်သို့ရေးဆွဲပါလိမ့်မည်သူကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဥပမာတစ်ခုထီ) approximates ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်သင်တို့အဘို့အကြောင်းမ: သဘာဝစမ်းသပ်မှု၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအားသာချက်ကတော့သုတေသီကုသကယ်မနှုတ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, နီးပါးတို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ Lorenzo Coviello et al. (2014) အနေနဲ့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်သဘာဝအစမ်းသပ်မှုဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သောအရာကိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ Coviello နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလူကမိုးရွာသည်အဘယ်မှာရှိရက်ပိုပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောစကားများနှင့်နည်းပါးလာအပြုသဘောစကားလုံးများကို post ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ရာသီဥတုကျပန်းအပြောင်းအလဲ အသုံးပြု. သူတို့မှာအားလုံးရောက်စွက်ဖက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲသတင်း Feed တွင်အပြောင်းအလဲများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ ရာသီဥတုထိုသူတို့အဘို့သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုအပြေးခဲ့လျှင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနည်းနည်းရှုပ်ထွေးသော်လည်း, ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရေးကြီးဆုံးအချက်သဘာဝစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးအသုံးပြုပုံ Coviello နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်ကို run ရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲစိတ်ခံစားမှုများပြန့်ပွားအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သုံးယောက်ရူပီး၏ဒုတိယသန့်စင်ပြီးဖြစ်ပါသည်: သုတေသီများတတ်နိုင်သမျှသူတို့ကိုအဖြစ်အန္တရာယ်ကင်းစေရန်မိမိတို့၏ကုသမွမ်းမံရန်ရှာခြင်းငှါသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစားအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ်စေခဲ့အကြောင်းအရာကိုပိတ်ဆို့ခြင်းထက်, သုတေသီများအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ်ခဲ့သည်အကြောင်းအရာကိုတိုးမြှင်နိုင်တယ်။ ဤသည်မှာတိုးတက်ဒီဇိုင်းသင်တန်းသားများကို '' News Feeds ၏စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာပြောင်းလဲပြီလိုပေမယ့်ဝေဖန်သူများကထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းစိုးရိမ်မှုများများထဲမှဖြေရှင်းကြလိမ့်မယ်: အစမ်းသပ်ချက်၎င်းတို့၏သတင်းများ Feed တွင်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များလက်လွတ်ဖို့သင်တန်းသားများစေပြီနိုင်ကြောင်း။ Kramer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသုံးပြုဒီဇိုင်းနှင့်အတူအရေးကြီးသောသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပေးကြောင်းတစ်ဦးအဖြစ်ပိတ်ဆို့ခံရဖို့အဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်တိုးမြှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအိုးအိမ်မဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းသောမက်ဆေ့ခ်ျများလျော့နည်းအရေးကြီးလှသည်သောသူတို့ကိုပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, တတိယ R ကိုလျှော့ချဖြစ်ပါသည်: သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့သိပ္ပံနည်းကျရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်နိမ့်ဆုံးမှ၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်သူများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်ရှာခြင်းငှါသင့်ပါတယ်။ Analog စစမ်းသပ်ချက်များတွင်, ဒီအကြောင်းမှာသင်တန်းသားများ၏မြင့် variable ကိုကုန်ကျစရိတ်၏သဘာဝဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်, သုည variable ကိုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်သူတို့အထဲတွင်သုတေသီများ၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှု၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သတ်ရင်ဆိုင်ရပါဘူး, ဤမလိုအပ်ဘဲကြီးမားစမ်းသပ်ချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, Kramer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကသူတို့သင်တန်းသားများကို-ထိုကဲ့သို့သော Pre-ကုသမှုပို့စ်အပြုအမူ-၎င်းတို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုပြီးထိရောက်စေအဖြစ်အကြောင်းကို Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်တယ်။ ပိုများသောအထူးသ, အစားကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားများအချိုးအစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက်, Kramer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအခြေအနေများအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်စကားများအချိုးအစားအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်, တစ်ခါတစ်ရံ (ပုံ 4.5) တစ်ဦးရောနှောဒီဇိုင်းကိုခေါ်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးခြားနားချက်-In-ကွဲပြားခြားနားမှုခနျ့မှနျးဟုခေါ်ဝေါ်သောတစ်ဦးချဉ်းကပ်။ ဒါကတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူအဘို့, သုတေသီတစ်ဦးအပြောင်းအလဲရမှတ် (Post-ကုသမှုအပြုအမူဖန်တီးနိုင်သည် \_(-\_) ပြီးတော့ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအတွက်သင်တန်းသားများကို၏ပြောင်းလဲမှုကိုရမှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Pre-ကုသမှုအပြုအမူ) ။ ဤသည်ခြားနားချက်-In-ကွဲပြားခြားနားမှုချဉ်းကပ်သုတေသီများအများကြီးသေးငယ်နမူနာသုံးပြီးတူညီတဲ့စာရင်းအင်းယုံကြည်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်, ကစာရင်းအင်းကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုန်ကြမ်းဒေတာမလိုဘဲ, တကခြားနားချက်-In-ကွဲပြားခြားနားမှုခနျ့မှနျးဤကိစ္စတွင်အတွက်ပါပြီမယ်လို့အတိအကျဘယ်လောက်ပိုပြီးထိရောက်သိရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်တစ်ဦးကြမ်းတမ်းစိတ်ကူးအခြားဆက်စပ်စမ်းသပ်ချက်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Deng et al. (2013) ခြားနားချက်-In-ကွဲပြားခြားနားမှုခန့်မှန်းတဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သူတို့သုံးကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းစမ်းသပ်ချက်ခန့် 50% ကသူတို့ခန့်မှန်းချက်များကှဲလှဲလျှော့ချနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကြောင်းအစီရင်ခံ; အလားတူရလဒ်များကိုအစီရင်ခံခဲ့ကြ Xie and Aurisset (2016) ။ ဤသည် 50% ကှဲလှဲလျှော့ချရေးသူတို့တစ်တွေအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးလျှင်စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်သုတေသီများထက်ဝက်မှာသူတို့ရဲ့နမူနာဖြတ်နိုင်ပါပြီအံ့သောငှါဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အလွန်သေးငယ်သောအပြောင်းအလဲနှင့်အတူ, 350000 လူများစမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်နှမြောပြီပေလိမ့်မည်။
350000 လူတွေကိုမလိုအပ်ဘဲစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ဖြစ်လျှင်သုတေသီများဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီအမှတ်မှာ, သငျသညျကိုအံ့ဩစေခြင်းငှါ။ အဲဒီမှာအလွန်အကျွံအရွယ်အစားနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်သင့်လျော်သောစေစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်နှစ်ခုအထူးသဖြင့် features တွေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဤအင်္ဂါရပ်များစွာကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များက shared နေကြသည်: (1) စမ်းသပ်မှုမှာအနည်းဆုံးအချို့သင်တန်းသားများနှင့် (2) ပါဝင်မှုဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မသေချာမရေရာလည်းမရှိ မိမိဆန္ဒအလျောက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှအသေးစားဤအင်္ဂါရပ်ရှိသည်စမ်းသပ်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, သင့်ရဲ့စမ်းသပ်မှု၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ဆန္ဒသင်သည်ကြီးမားသုည variable ကိုကုန်ကျစရိတ်စမ်းသပ်ချက်ကို run မထားသင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စမ်းသပ်ချက်သင်သည်သင်၏သိပ္ပံနည်းကျရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည်ထက်မဆိုပိုမိုကြီးမားမဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသင့်လျော်စွာသုံးနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ခုမှာအရေးကြီးသောလမ်းတစ်အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်ပါသည် (Cohen 1988) ။ ထို Analog စအရွယ်မှာတော့သုတေသီများယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏လေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာအောက်မှာ-powered) သေးငယ်လွန်းမဟုတျကွောငျးသေချာစေရန်အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုပြု၏။ သို့သျောယခုသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့လေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, Over-စွမ်းအင်သုံး) အရမ်းကြီးမားတဲ့မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာသုံး R's-အစားထိုးမွမ်းမံနှင့်လျှော့ချ-များကိုသုတေသီများက၎င်းတို့၏စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများသို့ကျင့်ဝတ်တည်ဆောက်ကူညီနိုငျသောအခြေခံမူ။ ဟုတ်ပါတယ်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ဤဖြစ်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများတစ်ဦးချင်းစီ trade-off ကိုမိတ်ဆက်။ ဥပမာအားဖြင့်, သဘာဝစမ်းသပ်ချက်ကနေသက်သေအထောက်အထားအမြဲကျပန်းစမ်းသပ်ချက်မှသကဲ့သို့မစင်ကြယ်သည် ဖြစ်. , content တွေကိုတိုးမြှင့်အကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ခြင်းထက်အကောင်အထည်ဖော်ပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပိုပြီးခက်ခဲခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအကြံပြု၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အခြားသုတေသီများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များဒုတိယ-ခန့်မှန်းဖို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစားကသုံး R ကိုဖွင့်မယ့်လက်တွေ့အခြေအနေ၌လျှောက်ထားနိုင်ပုံကိုဥပမာပေးရဖို့ပဲ။ တကယ်တော့, trade-off ၏ကိစ္စကိုသုတေသနဒီဇိုင်းအပေါင်းတို့၌အချိန်ထကြွလာလျက်, ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်အတွက်ဤသည်ဤ trade-off ပို. ပို. ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းအခန်း6မှာငါသုတေသီများနားလည်ကူညီရန်ဤ trade-off ဆှေးနှေးနိုငျသောသူအချို့အခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။